Onyinye Planeta 2018: Anyị na-ekpughe nkata nke ọrụ ikpeazụ. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi 2018: Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ 10 n'etiti nke bụ onye mmeri na onye ikpeazụ.
Taa, onyeisi oche nke otu Planeta na ndị juri nke Onyinye mbara ala 2018 ha ekpugheela atụmatụ nke akwụkwọ akụkọ 10 ikpeazụ na nnọkọ ogbako emere na Palacio de San Pau, nke Actualidad Literatura nọ.
Afọ a 2018, isiokwu nke akwụkwọ akụkọ ikpeazụ emeela mgbanwe dị mkpa mgbe mbipụta 65 nke Planeta Prize. Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na agha obodo nyere afọ a na akwụkwọ akụkọ ya na ndị nwanyị na-akwado ya. N'ime mmadụ iri ikpeazụ anyị chọtara akwụkwọ akụkọ dị iche iche (na ọchị, akụkọ sayensị, akparamaagwa na akụkọ ihe mere eme) yana akụkọ sayensị karịa mgbe ọ bụla. Otú a ka akwụkwọ akụkọ ikpeazụ si dị:
1 Ekele, site n'aka Sandra Glaser (pseudonym)
2 Ime ihe ike nwoke na nwanyị nke Paulina Ayerza (pseudonym)
3 Elele a Silent Sky, nke Elena Francis (pseudonym)
4 Mbili, nke James Sussex (pseudonym)
5 Nkà nke mgbapụ, nke Daniel Tordera dere.
6 Cherry Tree Shadow, nke Ariane Onna (pseudonym)
7 Ndị Losers, nke María Díez García dere
8 Nwunye Hatshepsut (pseudonym)
9 Angela site n'aka Leticia Conti Falcone
10 Nwa nwanyị di ya nwụrụ di ya nwụrụ, nke Ray Collins (pseudonym)
Ekele, site n'aka Sandra Glaser (pseudonym)
Ezigbo ezinụlọ saga. Akụkọ banyere mgba, mmeri na nlanarị nke ọgbọ atọ nke ụmụ nwanyị sitere n'otu ezinụlọ, bụ ndị nwoke nzuzu na-eme ka ara baa ụba, ebe onye na-ede akụkọ ahụ na-anwa ịghọta oge gara aga iji mee ka ọ dị ugbu a.
Ime ihe ike nwoke na nwanyị nke Paulina Ayerza (pseudonym)
Akwụkwọ ọgụgụ na-emebi iwu, yana akụkọ gbasara nwanyị nwere mmasị na njedebe na-awụ akpata oyi. Mgbe ọ mụsịrị banyere ọnwụ nwanyị ahụ bụ onye ọ hụrụ n'anya nke ukwuu, otu onye Argentine na-ese ihe na Paris bi na-akọ banyere nhụjuanya ọ gabigara na mmekọrịta siri ike nke ịchịisi na ịjụ mmekọrịta ọha na eze nke e guzobere n'etiti ha abụọ.
Elele a Silent Sky, nke Elena Francis (pseudonym)
Sci-fi thriller. Ìhè dị omimi, nke ndị sayensị na-enweghị ike ịchọta nkọwa ọ bụla, pụtara na mbara igwe. Agbanyeghị, nsonaazụ ya na-apụta n'oge na-adịghị anya: mmadụ dị iche iche gburugburu ụwa na-amalite ịkekọrịta ncheta, na-ata ahụhụ abalị ma na-emekọrịta ihe maka ndụ.
Mbili, nke James Sussex (pseudonym)
Nrịgo dị egwu nke nwanyị n'ime ụwa nke ụmụ nwoke mikpuru onwe ha n'ọgụ maka ike ọchịchị na ndị na-eche na ọ bụ naanị ha nwe ọchịchị. Onye protagonist ahụ ga-eji amamihe wepụta onwe ya iji mezuo ebumnuche ya.
Nkà nke mgbapụ, nke Daniel Tordera dere.
Sci-fi dystopia nke ndi enyi ano ochie na-eteta n'ime ime ulo mechiri emechi nwere nani otu igbe. N'ime, egbe, mgbọ atọ na mpempe akwụkwọ, nke na-ekwuwapụta na ọ bụ naanị otu n'ime ha ga-adị ndụ. Ha ga-ekwenye, kpebie onye ga-adị ndụ ma gbuo onwe ya ọzọ.
Cherry Tree Shadow, nke Ariane Onna (pseudonym)
N'otu obodo dị na mba French Basque, otu ihe egwu jọgburu onwe ya nke na-eju onye ọ bụla anya: Gini nwere ike iduga nwanyị nwere obi uto iji kwụsị ndụ ya na nwa ya nwanyị nke gafere otu afọ? Nke a bụ ihe omimi nke onye na-akọ akụkọ ga-anwa ikpughe, na-abanye n'ime nhụjuanya na owu ọmụma nke ịbụ nne na-egosi.
Ndị Losers, nke María Díez García dere
Akụkọ nke mmadụ abụọ na-emegide onwe ha na-agafe ma na-agbanyeghị na ha amaghị. Ya, nwoke kụrụ aka site na ọrụ na onye, ​​na-abụghị ọrụ ya pụrụ iche, na-eduga ndụ dị mma; ọ, onye nzuzo na-ahụ maka nkwenye na nyocha nke ikpe igbu ọchụ.
Obí nke Modernist nke San Pau: Ọnọdụ nke nsọpụrụ maka ngosipụta nke ọrụ ikpeazụ maka ihe nrite 2018 Planeta.
Nwunye Hatshepsut (pseudonym)
Akwụkwọ akụkọ banyere akụkọ ihe mere eme. Valencia, S. XVI: nwanyị hụrụ ụwa mbụ chess codex. New York, narị afọ nke XNUMX: dọkịta na-etinye aka na ọchụchọ maka codex a. Nnyocha ahụ ga-akpọga ya na Valencia, ebe ọ ga-achọpụta oge ọhụụ ya na ọhụụ ya.
Angela site n'aka Leticia Conti Falcone
Onye edemede a maara nke ọma na-apụ na ụdị edemede mbụ ya na akwụkwọ ọgụgụ mpụ Raymond Chandler. Ọnwụ nke otu onye Uruguayan na-eto eto, nke ewepụtara iji dozie ederede na ide akụkọ ojii, na-eme ka kọmishọna Piedrahita lọghachi n'ọrụ, na-achọpụta na nwanyị ahụ nwere nsị n'ezie. Ma ònye nwere ihe kpatara igbu ya?
Nwa nwanyị di ya nwụrụ di ya nwụrụ, nke Ray Collins (pseudonym)
Black akwụkwọ na a ihu ọchị. Onye nkịta onye nkịta nke Argentine na-etinye aka n'ihe banyere Black Widow, onye na-abọ ọbọ nke na-egbu ndị ahịa akwụna. Ọ na-enyo ọtụtụ ụmụ nwanyị enyo ma ọ mechara chọpụta na ọ bụ ihe ọ bụla karịa mkpuchi maka azụmaahịa nzuzo nke ejikọtara nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ.
Kedu nke ọrụ ndị a ga-abụ onye mmeri na onye ikpeazụ nke Nrite 2018 Planet? A na-ahapụ ịkụ nzọ. Echi October 15, 2018, ụbọchị Saint Teresa, dị ka Ọktoba ọ bụla maka afọ 65, iji kwanyere Teresa, bụ nwunye onye guzobere, ihe omimi ga-ekpughe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Asọmpi na Awards » Onyinye Planeta 2018: Anyị na-ekpughe nkata nke ọrụ ikpeazụ.
Garcilaso de la Vega. 5zọ XNUMX kachasị mma iji cheta ya